सियोलमा तातो क्षेत्रहरू
कहाँ जाने र के गर्ने?
तपाई इटावोन, मियye्गडong वा ह Hong्गडे नामहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ होला, तर के तपाईंलाई यी क्षेत्रहरूमा कस्ता प्रकारका कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर तपाईंलाई साँच्चिकै थाहा छ? तपाईं यो ब्लग विवरण र सियोल को सबै भन्दा प्रसिद्ध र सबैभन्दा चर्चित क्षेत्रहरु को लागी गतिविधिहरु पाउनुहुनेछ! तसर्थ, यदि सियोलमा तपाईंको बसाई छोटो छ भने पनि, तपाईं कुन स्थानहरू भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ र त्यहाँ के गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ!
ह Hong्गडे निश्चित त सियोल भ्रमण गर्ने युवाहरूको लागि सबैभन्दा तातो ठाउँ हो। यो विद्यार्थी क्षेत्र हik्गिक विश्वविद्यालय नजिकै अवस्थित छ र तपाईं सबवे लिन सक्नुहुनेछ, लाइन २ यस धेरै तातो ठाउँको भ्रमण गर्न जान। तपाईले धेरै चीजहरू भेट्टाउनुहुनेछ, किनमेल गर्नदेखि क्यारोकेसम्म, रेष्टुरेन्टहरूमा स्वादिष्ट खाना खानु, जुन प्रायः सस्तो हुन्छ। धेरै जसो समय, तपाईले प्रत्यक्ष बसिंग वा डान्सर्सलाई केपीप गीतहरूमा केही अविश्वसनीय कोरियोग्राफी गर्दै सहयोग गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। यो क्षेत्र पर्यटकहरु बीच र कोरियालीहरु बीच धेरै सराहना गरिएको छ। तपाईं दिनको उज्यालोमा वा रातमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईंले सधैं मनपर्दो चीजहरू फेला पार्नुहुनेछ।
इटाइवानका लागि, यो हाल सियोलको सबैभन्दा चर्चित क्षेत्र हो र यसभन्दा बढी पर्यटकहरू ल्याउने सफल नाटक "इटावन क्लास" को पुन: खुशी पछि पनि। इटावेन एक अन्तर्राष्ट्रिय जिल्ला हो जहाँ तपाईं विश्वभरिबाट रेस्टुरेन्टहरू, संस्कृति र धर्महरूको मिश्रण पाउनुहुनेछ। वास्तवमा तपाई सियोलको पहिलो मस्जिद इटावेनमा भेट्न सक्नुहुन्छ, हलाल पसल र रेष्टुरेन्टहरूले घेरिएको। तर सबै भन्दा माथि, Itaeon पार्टीिंग र क्लबिंगको लागि प्रसिद्ध छ। वास्तवमै त्यहाँ बारहरू, क्लबहरू र कराओक्सहरू छन्। यस जिल्लालाई विदेशीहरू र कोरियालीहरूले यति मन पराउँछन्।
Myeongdong एक गो क्षेत्र हो एक क्षेत्र छ यदि तपाईं शपिंग गर्न को लागी योजना बनाउनु हुन्छ र स्मृति चिन्ह र उपहार आफ्नो साथीहरु र परिवार को लागी ल्याउन। स्वाभाविक रूपमा, तपाईले आफूलाई चाहिएको सबै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ र अधिकमा! र सौन्दर्य प्रसाधन प्रेमीहरूको लागि यो तपाईंको स्वर्ग हो, किनकि तिनीहरू सयौं ब्रान्डहरू हुन् जुन सब भन्दा प्रसिद्धबाट कम चिनिएको हो। Yतपाईले खोज्नु भएको सबै चीज पाउनुहुनेछ। र यसको सब भन्दा राम्रो अंश, के यो तपाईं वरिपरिको सडक फूड छ! कोरियाली स्न्याक्स खाँदा तपाई किन्नै रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले पहिले कहिल्यै नहेर्नु भएको थियो, जस्तै अण्डको रोटी वा टोर्नाडो आलु।
गंगनमको शाब्दिक अर्थ 'नदीको दक्षिण हो, किनकि यो हान नदीको मुनि अवस्थित छ। गंगनाम सियोल प्याक गरिएको आकर्षणको श्यापिंग, रेस्टुरेन्ट र गगनचुम्बी भवनहरूको फेसनयोग्य, ठाडो र आधुनिक केन्द्र हो। गंगनम शपिंग प्रेमीहरूको लागि धेरै प्रसिद्ध छ। तपाईं विशाल पाउन सक्नुहुन्छ शपिंग मॉलहरू जस्तै COEX, र उच्च-अन्त डिजाइनर लेबलहरू। यदि तपाईं कोरियाली संगीत (K-pop) मा रूचि राख्नुहुन्छ भने, तपाई बिगिट मनोरन्जन, एसएम टाउन, JYP मनोरन्जन जस्तै केपप एजेन्सीहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। क्षेत्रका रात्रिजीवन पनि धेरै व्यस्त र जीवन्त छ अपस्केल नाइटक्लब र बारहरूको साथ, यस क्षेत्रलाई एक बनाउँदै बिहान नभएसम्म नाच्न र जीवनको आनन्द लिन धेरै राम्रो ठाउँ!
गंगनाम मा COEX
हान नदी र यसको वरपर सियोलको बीचमा अवस्थित छ2शहर अलग गरिरहेछ। यो राजधानी को बासिन्दा को लागी एक लोकप्रिय स्थान गठन गर्दछ। यो स्थान वास्तवमै एक किसिमको मिनी यात्रा गन्तव्य हो तपाईको भ्रमणको आगाडि योजना बनाउने आवश्यकता बिना। तपाईं आराम र तपाईंको परिवार, साथीहरू र आसपासका धेरै पार्कहरूमा प्रियजनहरूसँग एक सुन्दर समयको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओ को लागीत्यहाँ व्यक्तिहरू केही थप एड्रेनालाईन हडबडा चाहान्छन्, तपाईं पानीको खेल वा नदीको किनारमा बाइक सवारीको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, यदि तपाईं अलि भोकाउनु भएको छ भने तपाईंले आफ्नो खाना बाटोमा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ!
इन्साडाong्ग जिल्ला, सियोल शहर को केन्द्र मा स्थित, यसको बहु पसल र रेष्टुरेन्टहरूको लागि विदेशहरूमा राम्रोसँग परिचित छ। सबै भन्दा माथि यो यसको सडकहरू र संयुक्त ऐतिहासिक र आधुनिक वातावरणको लागि चिनिन्छ जुन तपाईं त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो सियोल को एक अद्वितीय क्षेत्र हो कि वास्तवमा दक्षिण कोरिया को विगत को प्रतीक। Insadong जिल्ला वरिपरि, तपाईं जोसेन युग देखि महलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। इन्साडाong्गमा कलाको पनि प्रमुख स्थान हुन्छ। असंख्य ग्यालरीहरू परम्परागत चित्रकला देखि मूर्तिकला सम्म सबै प्रकारको कला प्रदर्शन जहाँसुकै फेला पार्न सकिन्छ। र त्यस पछि परम्परागत चिया घर र रेष्टुरेन्टहरू यस जिल्लाको भ्रमण पूरा गर्नको लागि उत्तम ठाउँहरू हुन्।
Soukaina Alaoui र Caillebotte लौरा द्वारा लिखित
फेसबुक मा शेयरफेसबुक मा शेयर ट्वीटट्विटर मा शेयर WhatsApp मा शेयरWhatsApp मा शेयर यो पिनPinterest मा शेयर LinkedIn मा शेयरLinkedIn मा शेयर